Tag: hacked | Martech Zone
Mgbe ọrụ ọhụrụ kụrụ n'ahịa m chọrọ ịnwale, ana m edebanye aha ma nye ya nnwale ule. Maka ọtụtụ nyiwe, akụkụ nke onboarding bụ igosi subdomain na sava ha ka ị nwee ike ịgba ọsọ n'elu ikpo okwu na subdomain gị. Kemgbe ọtụtụ afọ, agbakwunyela m ọtụtụ subdomains ndị rụtụrụ aka na ọrụ dị iche iche. Ọ bụrụ na m kwụsịrị ọrụ ahụ, anaghị m echefukarị nhicha ahụ
A ezigbo enyi m na nso nso nwetara ya WordPress blog hacked. Ọ bụ ajọ mbuso agha nwere ike inwe mmetụta na ogo ọchụchọ ya yana, n'ezie, ike ya n'okporo ụzọ. Ọ bụ otu n'ime ihe kpatara m ji enye ụlọ ọrụ buru ibu ndụmọdụ ka ha jiri usoro ịde blọgụ nke ụlọ ọrụ dịka Compendium - ebe enwere otu ndị nlekota na-achọ gị. (Ngosipụta: Abụ m onye na - ekenye gị) Ndị ụlọ ọrụ anaghị aghọta ihe kpatara ha ga-eji kwụọ ụgwọ maka ikpo okwu
Nke a bụ karịa ajụjụ maka mkparịta ụka kama ịza ajụjụ. Ahụmahụ m na ịde blọgụ bụ na agbanwe agbanwe bụ ihe niile. Ọ bụrụ na ndị na - agụ akwụkwọ gị na - atụ anya ịnweta ọdịnaya ọhụrụ kwa ụbọchị, ha ga - alaghachi na saịtị gị kwa ụbọchị iji nweta ọdịnaya ahụ. Ezigbo ajụjụ bụ: Ugboro ole ka onye ọbịa ga-alaghachi na weebụsaịtị gị iji chọpụta ọdịnaya ọhụụ tupu ha akwụsị ịlaghachi? Anọ m na-eme ụfọdụ ule